Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Ndị Switzerland na-akpachara anya maka ndị njem China banyere ụjọ COVID-19
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Akụkọ na -agbasa ozi Switzerland • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ dị iche iche
The bi na Switzerland agbanweela echiche ha kwupụta uka njem n'ihi na Covid-19 oria ojoo.
Ndị ọkachamara na-eme njem si Mahadum Switzerland nke Nkà Mmụta Ahụhụ mere nyocha nke ndị bi na Lucerne, nke gosipụtara na 80% nke ndị 1,530 zaghachiri kwenyere na e nwere ọtụtụ ndị njem nleta na obodo ahụ.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ, na ọ bụ ezie na ọtụtụ ebe ndị njem nleta ka na-emechi, Switzerland na-ama na-akwadebe maka oghere nke oge. Otú ọ dị, ndị bi n'ógbè ahụ mere ụfọdụ nhọrọ na ihe na-adịghị amasị ha n'ihe metụtara ìgwè dị iche iche nke ndị ọbịa.
Ndị bi na Switzerland anaghị anabata ndị ọbịa si Asia na North America. Ihe kachasị mma bụ ndị njem si Switzerland na Europe.
N’ihi ọrịa na-efe efe nke COVID-19, ndị bi na Switzerland na-atụkarị ndị njem si mba Asia ụjọ. Otu ìgwè ahaziri na China na-abịakarị Lucerne.
47% nke ndị zaghachiri kwuru na ha lere otu ndị njem ahaziri ahazi si China adịghị mma.
63% nke ndị zaghachirinụ nwere echiche ziri ezi banyere njem nleta. Tourism a maara na-ewetara ịrịba revenue na Switzerland.